iMovie Talo & Tricks aad ka ogaato k
1. Multi-taabashada baaqyada
2. Labaad Display
4. Dadka Finder
8. dhaceen Map
10. Video Xasilinta
Correction 11. Color
13. Title nuqul
16. Saameynta Audio
Kan sameeyey 17. Beat
19. Xayiraadda Frames
Haddii aad ku qalabaysan MacBook ama desktop ah Mac la Apple ee MagicPad, waxaad samayn kartaa isticmaalka qaababka kala duwan ee la taabto inaad qaadato aalada tafatirka uruursanayey ah.
Si aad ku dari clip ah in aad mashruuc, si ay u tagaan browser Event oo isticmaal dadban saddex farta ilaa aad trackpad.
Dhaqaaq dulqabo kor ku xusan warbaahinta iyo noqanayaa farahaaga u furan in ay ballaariso iyo noqanayaa farahaaga xiray qandaraas aad aragtida warbaahinta.
Dooro clip gudahood aad waqtiga, iyo sida loo isticmaalo weerar saddex farta si ay u guuraan midig ama bidix.
Haddii aad qabto bandhigay labaad ku xiran si aad u computer, waxaad samayn kartaa siladda iMovie kaliya muuqan bandhigay labaad si ay u baahiso aad meesha uu furmo suuqa iMovie ah. Si aad u dhigay iMovie si ay u muujiyaan video bandhigay labaad:
1. Hubi Tools Advanced waxaa lagu gagadin in iMovie door bidayso.
2. Dooro Window> "siladda on kale Display".
Hadda ma waxaad dajiyaan karaa oo kaliya sawiro ka PhotoBooth iyo iPhoto, laakiin sidoo kale ka sawirkaaga Facebook gallery, si iPhoto updated, taas oo ka dhigaysa faa'iido iLife ka dhexgalka qoto dheer la Facebook mahad. Halkan sida:
1. Open iPhoto oo u hagaagsan barnaamijka la xisaabtaada Facebook.
2. Dooro gallery sawir aad rabto in aad ka. Markaas sawirada lagu kaydin doonaa biraawsarkaaga Media iLife, iyaga laga heli karaa dhammaan barnaamijyada kale ee ay ka mid yihiin iLife iMovie.
3. Ka dib markii in, waxaad bilaabi kartaa abuurista kuu gaar ah slideshow iMovie.
iMovie ka dhigaysa mid u fudud in ay la socdaan oo ka mid ah dadka oo dhan wax soo saarka aad. Waxaad isticmaali kartaa feature Dadka Finder si ay u falanqeeyaan oo dhan clips video mashruuc oo indentify clips leh dadka waxa ku jira. Si tan loo sameeyo, kaliya raacaan talaabooyinka soo socda:
1. Hubi "Tools Show Advanced" waxaa laga door bidaan in iMovie ee.
2. Dooro mashruuca oo taga si "File"> "Falanqeeyaan Video"> "Dadka".
3. taxliilin Marka iMovie ayaa ku dhameysatay, line guduudan muuqan doonaa tilmaamaysa clips ah oo ay dadku u muuqdaan.
Haddii aad ku soo gani video ah oo ka soo jeeda hal midab leh (badanaa cagaaran ama buluug ah), iMovie kuu ogolaanayaa inaad si ay u sameeyaan midab in hufan. Waxaad ka bedeli kartaa asalka wixii kale video clip, graphic ama weli image sida aad jeceshahay. Function Taasi waxaa loo yaqaan Green / Blue Screen. Halkan waa tuse faahfaahsan oo sida loo isticmaalo iMovie Green / Saamaynta Screen Blue >>
Haddii aad rabto in laba ama ka badan clips ciyaari isku mar shaashadda isla, iMovie kaa caawin karaan in. Waxay ku siinaysaa ikhtiyaar buuxa si ay u isticmaalaan sawirka sawirka ama dhinac saamayn. Raac tilmaanta tallaabo-tallaabo si ay u bartaan sida loo isticmaalo sawirka sawirka in iMovie.
iMovie ayaa Sports Editor, taas oo uu leeyahay tayo gaar ah ku daray magacyada ciyaaryahanka iyo tirakoobka, ciyaaryahanka photos iyo logos kooxda. Waxaa helo macluumaadkan via ka Editor Kooxda Sports. Hadda waxaad kala socon kartaa hage in ay abuuri karto Tilmaamay isboortiga gaar ah ku qasabno.
iMovie kale oo ay bixisaa Hababka map oo aad u dhigi karto filimada aad. Waxaa ka mid ah maps kartoon ah caalamka, khariidado guri dhaceen, iyo khariidado guri ma guurto ah. Muddo saddex qaybood jira afar nooc oo maps: Old Adduunka, Watercolor, Waxbarashada, iyo marmar Blue. Tilmaan-bixiyahan waxa uu kuu sheegayaa sida si ay u abuuraan map ah dhaceen in iMovie.
iMovie ayaa animatics aad u xoqdo hirgelin kuu gaar ah, ka dibna iyaga ku bedelan maqnaan footage aad ka dib waa toogan. Si aad ku dari animatics, waxaad:
1. Tag "Window"> "Maps, soo jeeda iyo Animatics" iyo hoos si aad u hesho animatics kala duwan.
2. Jiid-n-daadiyaa mid aad u baahan tahay in waqtiga. Markaasay aad leedahay doonaa clip filler ah in ka dib waxaa lagu bedeli karaa clip dhab ah.
3. Haddii aad clip cusub oo uu diyaar u yahay, waxa jiidi gal animatic ah. Sii daayo button mouse oo guji beddel, iyo shaqo loo sameeyo.
Haddii aad videos waa deganayn oo aad u gariir si aad u daawato, maxaa yeelay, camera ruxmay yara idinkoo qoro, iMovie caawin kara hagaaji. Waxaa lafaguraa jir kasta hal video clip ah oo Fayda ruxruxaa mar helo in mooshin camera ah waa yara marka lagu qoro. Riix halkan si aad u barato macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xasilinta video in iMovie.
Marka lagu qoro videos, mararka qaarkood camera la wiiqo laga yaabaa dheelitirka dhalaalka ama midabka, ama nalalka deegaanka ee barayaa midabkeeda midabka ah. iMovie kaa caawin karaan inaad la saxo aad footage si ay u helaan midabo run ku hoos jira xaalad nalal kala duwan oo kor u midabo daciif ah. Raac buugan si aad u baratid sida loo isticmaalo iMovie function saxo midabka.
Ma doonaysaa in subtitles daro in kuwa kalena ha u Yaqaannaan Nabiga doonayaan baahina ay u muujiyaan in aad video? Taasi waa u fududahay! iMovie yimaado oo leh qaababka badan Cinwaan in aad ku darto xirfad subtitles raadinaya in aad videos. Halkan waxay leedahay Hanuuniye inaan idin ​​baro sida loo dar iyo subtitles edit la iMovie.
Marka sixiddiisa videos la iMovie, waxaa laga yaabaa in waqti badan, waxaad ku Bixisaan abuurayo qaar ka mid ah kaararka horyaalka, ka dibna sixiddiisa in ay u dhigma oo dhererkeeda iyo font style aad mid hore. Dhab ahaantii, oo dhan ee aad u baahan tahay inaad samayso waa isticmaali feature nuqul horyaalka ee iMovie. Just dooro clip iyo dooran "clip"> "nuqul Last Tile", xaalkaa qoraalka iyo dhaqaaqo.
iMovie gelineya inaad ku darto macluumaad timestamp si aad video. Si tan loo sameeyo, kaliya raacaan Hanuuniyaa fudud ee hoose.
1. Riix Button Ciwaanada qeybta hoose ee shaashadda. Dooro Taariikhda / Waqtiga horyaalka oo jiidi badan clip ah maktabadda Mashruuca. Tani waxay ku dari doonaa macluumaadka timestamp.
2. Haddii macluumaad waqtiga iyo taariikhda uu yahay mid aan sax ahayn, dooro clip ee browser Event ah (ma aha ee waqtiga). Markaa waa inaad aadaa "File"> "Dheellitir clip Taariikhda iyo Waqtiga". Sanduuqa A furi doonaa oo aad edit karaa macluumaadka timestamp.
Ku darista kala guurka oo u dhexeeya clips caawin kara siman ama milmaan isbedelka ka mid goobta in kale. Dooro ka kala guurka cajiib ah in iMovie oo qarka u saaran mudada sida aad jeceshahay. Halkan waa tuse faahfaahsan oo sida loo dar iyo kala guurka edit la iMovie.
iMovie ma aha oo kaliya awood kuu siinayaa in aad ku darto saamaynta muuqaal cajiib ah in aad video, laakiin sidoo kale saamaynta qabow audio. Hadda waxaad ku dari kartaa saamaynta sida Echo, Cathedral, cidhiidhi gala, iyo in la beddelo garoonka of audio ee kor ama hoos. Halkan waxaa ku qoran tilmaan faahfaahsan >>
Haddii aad xiisaynayso in music tafatirka, kaliya isku day iMovie qasa calamado baxay. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad dhigay dhibcood track maqal ah oo hoos u in video la jeexan u dhigma garaaca ah. Waxay u egtahay xiiso leh? Hadda isticmaalaan buugan si aad u baratid sida loo isticmaalo, Uumahaaga ayaa ku garaacay iMovie.
Voice-badan ku dari kartaa xiriiri shakhsi iyo caawiyaan sheeko ah. Haddii aad dareensan tahay in aad filin ka faa'iidaysan karaan cod gacanta ku hogaamiyay, si fudud iyaga waxaad ku dari kartaa in iMovie. Akhri hagahan si ay u bartaan sida si ay u qoraan iyo dar cod-badan si aad iMovie videos.
Ma rabtaa inaad ku dar Free Frames saamayn sixir si ay u abuuraan filim Hollywood-sida? Waxaad samayn kartaa lacag la'aan ah iyadoo la isticmaalayo iMovie, waana cinch ah.
1. In browser Mashruuca, guuraan playhead ah (khadka cas oo taagan) in ka badan ku yiilleen aad rabto inay hakiso, ka dibna hoos u hay muhiim ah Control sida aad riix.
2. In menu ka muuqata, dooran dar jir ah debcinta. Markaas ah hakinta-jir clip la geliyo ee playhead ah. Waxaad u soo jiidi kartaa meel cusub ee mashruuca iyo beddelo muddada.
iMovie ka mid ah saamaynta Ken Burns oo kuu ogolaanaya in aad bedesho abuurka ah ee video clip ama sawir muddo ka dib. Waxa kale oo loo isticmaali karaa si wax ku ool ah u muujiyaan si faahfaahsan ee photos badan oo walxaha ballaaran ama dheer. Halkan waxay leedahay Hanuuniye inaan idin ​​baro sida loo dar iyo ka saari Ken Burns saamayn ku iMovie.
Sida loo soo dhoofsadaan Mpg in iMovie?
5 talooyin update iMovie on Mac
Sida loo soo dhoofsadaan FLV in iMovie
> Resource > iMovie > 20 Tricks iMovie aad ka ogaato